नेप्से परिसूचकसँगै बढ्याे काराेबार रकम, के बजारमा राैनकता फर्किएकै हो ? - Arthasansar
नेप्से परिसूचकसँगै बढ्याे काराेबार रकम, के बजारमा राैनकता फर्किएकै हो ?
सोमबार, ०८ कार्तिक २०७८, १५ : ०६ मा प्रकाशित
साेमबार पनि सेयर बजारमा राैनकता देखिएकाे छ । आज बजार झण्डै ३.३९ प्रतिशतले बढेकाे छ । नेप्से परिसूचकसँगसँगै काराेबार रकम पनि बढेकाे छ । यस दिन डेढ दर्जन कम्पनीकाे सेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेकाे छ ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर वृद्धिमा कडाइ गरेपछि सेयर बजारमा राैनकता फर्किएकाे देखिएकाे छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आज (साेमबार) सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ८७.६३ अंकले बढेर २६७२.२५ विन्दुमा पुगेकाे छ । नेप्से ३.३९ प्रतिशतले बढेकाे हो । यस्तै, सेन्सेटिभ परिसूचक पनि १३.६१ अंकले बढेर ५०४.५७ विन्दुमा पुगेकाे छ ।
कूल २२९ वटा कम्पनीकाे ८३ लाख ९५ हजार ८ सय ६४ कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा ४ अर्ब ३० करोड ८८ लाख ९५ हजार ५ सय ७५ रूपैयाँ बराबरको कारोबार भएकाे नेप्सेले जनाएकाे छ ।
स्टकका अनुसार काराेबार भएका १३ उपसमूहमध्ये सबै उपसमूहकाे सेयर बढेकाे छ । सबैभन्दा धेरै फाइनान्स र हाइड्राेपावर उपसमूह बढेकाे छ ।